Gisella Cardia - Tsy hisy zavatra hitovizany - Countdown to the Kingdom
Izahay dia	Gisella Cardia	, 23 Mey 2020:
Zanaka malala, misaotra anao nivory tamin'ny vavaka ary noho ny fihainoanao ny antsoko ao am-ponao. Ry zanako, mandehana manodidina anareo: ny zanako malalako [izany hoe pretra no mifanohitra. Nangataka vavaka taminao aho ary mbola manontany azy ireo aho, satria ankehitriny ny pretra dia manohitra ny mpiara-miasa aminy, manohitra ny eveka ny eveka, ary izany rehetra izany dia niteraka fisavoritahana be ao anaty andian'ondry ihany. Ry zanako, miverena amin'Andriamanitra fa toy izany dia tsy ho aiza ianao, fa amin'ny fahaverezana tanteraka fotsiny. Tsy hisy na iray aza hiverina aloha,cf. Ny Toeran'ny tsy fiverenana ary aza avela hofitahin'i satana ianareo, fa izy no rain'ny lainga. Esory ny tenanareo ary fenoy Andriamanitra izay hany fifaliana marina. Mifanaraka amin'ny lanitra mba hahafahanao miatrika am-pitoniana ny fampitandremana izay manakaiky kokoa. Ankehitriny dia avelako miaraka amin'ny tsodrano aman-dreniko, Raiko, Zanako ary Fanahy Masina. Amen ".
↑1 cf. Ny Toeran'ny tsy fiverenana
Medjugorje - Ny fanavaozana ho avy →